iTunes nwayọọ? 10 Atụmatụ Iji Mee iTunes 10 agba ngwa ngwa
> Resource> iTunes> 10 Atụmatụ Iji Mee iTunes 10 agba ngwa ngwa
Ọ bụrụ na ị na mgbe na-agba ọsọ iTunes na ma Windows na Mac sistemụ tupu, i nwere ike achọpụtala na iTunes maka Windows bụ ọtụtụ iji nwayọọ karịa iTunes maka Mac. Ụfọdụ onye kwuru na nke a bụ n'ihi na Apple bụghị oké njọ banyere iTunes maka Windows na chọrọ egosi ndị mmadụ na iTunes na-arụ ọrụ ngwa ngwa na Mac sistemụ n'ihi na ọ bụ ihe dị nnọọ mma. Onwe ya, m na-adịghị eche otú ahụ. iTunes bụ ndị kasị ewu ewu media njikwa software na ma Windows na Mac, ma ụfọdụ atụmatụ na-arụ ọrụ mma na ngwa ngwa na Mac OS, ruo n'ókè ụfọdụ. Site na iwepu enweghị isi ọrụ na atụmatụ na iTunes, ị nwere ike kpam kpam adị n'elu gị iTunes n'agbanyeghị sistemụ arụmọrụ. Ndị a njikarịcha Atụmatụ nwekwara ike-eji na-eme ka gị na iTunes agba ngwa ngwa na Mac.
Apụghị ịtachi obi na ngwa ngwa iTunes? Chọta free iTunes uzo ozo ebe a, ma ọ bụ na-iTunes ngwaọrụ welie ahụmahụ.
Ngwa ngwa Installation
iTunes adịghị abịa arụnyere na Windows. Ị mkpa ibudata ya aka na wụnye na Windows usoro. Tupu ịmalite iji wụnye, gwụ agbakwunye music nhọrọ ga-wụnye iTunes ngwa ngwa. Mgbanwe a pụtara, Otú ọ dị, na ị ga-mkpa mbubata gị music mgbe e mesịrị.
Gbanyụọ enweghị isi Services
Apple na-emekarị na-eburu na i nwere iPod / iPhone / iPad na ọtụtụ ọrụ na-emeghe ndabara. Ọ bụrụ na ị na-enweghị Apple ngwaọrụ, gbanyụọ ndị a nhọrọ.
1. Launch iTunes na pịa Dezie Mmasị.
2. Gaa Devices taabụ.
3. Uncheck nhọrọ nke Kwe Ka iTunes akara si n'ime obodo ọkà okwu na remotes Chọọ iPod aka, iPhone na iPad. Ọ bụrụ na ị na-adịghị ịkọrọ gị ọbá akwụkwọ na kọmputa na netwọk gị, na-aga Ịkekọrịta taabụ na gbanyụọ nhọrọ Share m n'ọbá akwụkwọ na m mpaghara na netwọk.
Wepụ Smart Ndetuta egwu ọkpụkpọ
iTunes ga-mgbe niile nyochaa gị ọbá akwụkwọ n'ịwa Smart Playlist, nke ogide nza nke usoro ego. Hichapụ ejibeghi Smart listi ọkpụkpọ iji mee ngwangwa iTunes.
1. Run iTunes, nri pịa a smart playlist na họrọ Wepụ.
2. Tinyegharịa usoro a na-ewepụ ndị ọzọ Smart anatara. �
na iTunes Genius atụmatụ-enyere gị aka ịchọpụta ọzọ music n'ihe ị na-ege ntị, na tụnyere gị music uto na ndị ọzọ, na-eji ọtụtụ ihe onwunwe, kwa. Iji gbanyụọ Genius, Go na-echekwa menu ma họrọ Gbanyụọ Genius.
Hichapụ oyiri Files
A nnukwu music n'ọbá akwụkwọ ga-akwụsịlata gị iTunes. Ya mere, ọ dị mkpa ka ihichapụ oyiri faịlụ iji belata iTunes music n'ọbá akwụkwọ iji nweta a ngwa ngwa iTunes. Ebe a bụ otú:
1. Open iTunes na-aga gị n'ọbá akwụkwọ.
2. Pịa File menu wee pịa Ngosipụta oyiri ihe.
3. oyiri ihe na-egosipụta. Right pịa na song ị chọrọ iji wepụ na pịa Wepụ.
4. Kwenye site na ịpị OK.
Gbanyụọ Cover Flow
Ọ bụ ezie na Cover Flow bụ echiche anya-akụta, ọ bụ onye na-adịghị na-agba ọsọ na ihe ọjọọ mgbe ị kwesịrị chọta music. Kama Cover Flow echiche, anyị na-atụ aro findingiTunes music ọkọlọtọ List ele. Ịgbanwe ya, na-aga na-ele na họrọ "dị ka List" ma ọ bụ ndị ọzọ na-ele mode kama Cover Flow.
Enweghị isi na kọlụm ọmụma na ndepụta ọkpụkpọ gị bụkwa onye na-akpata ngwa ngwa iTunes. Ọtụtụ ogidi bụghị nanị na-eji ihe onwunwe, ma ka ọ na ihe siri ike ịhụ nke Ama ị chọrọ. Iji belata a tụkọtara, nri pịa kọlụm mmanya n'elu na mgbe ahụ uncheck na-abaghị uru ogidi.
Kwụsị manụ Ozi
The "Ọ bụghị dị ka m ọzọ" ọzọ ọmụma bụ manụ. Lelee ya iji nweta a jụụ ụwa, na-azọpụta oge.
Jiri nchekwa na Hazie Ndetuta egwu ọkpụkpọ
Ọ bụrụ na ị nwere otutu albums, hazie ya n'ime playlist nchekwa ga-enyere gị aka ịchọta ya ngwa ngwa. Iji mee otú ahụ, dị nnọọ pịa File / New Playlist nchekwa. The i nwere ike ịdọrọ na dobe gị playlist na ya.
Gbanyụọ Automatic syncing
Nchekwa onwe syncing bụghị mgbe niile dị mkpa, n'ihi na ọ bụ eleghị anya na gị na mkpa iji nyefee ụfọdụ foto gị iPhone iji iPhoto, kama syncing music. Ị pụrụ ọbụna nyefee music / video enweghị iTunes. Ya mere, ị na-atụ aro iji gbanyụọ akpaka syncing dị ka nke a: họrọ gị ejikọrọ ngwaọrụ site n'aka ekpe sidebar na uncheck Automatic mmekọrịta nhọrọ.
All Atụmatụ adịghị aka? Na na na, dị nnọọ na-free iTunes uzo ozo ebe a.
Hazie iTunes Library akpaghị aka
TunesGo bụ nnọọ dị ike music ngwaọrụ nke music hụrụ, o nwere ike na-ebuli gị iTunes na obodo music n'ọbá akwụkwọ na nanị otu click. Chọta efu ọmụma, album artwork na lyrics mfe, tinye efu cover nkà, ihichapụ duplicates, na-ewepụ efu / agbajikwa tracks.